News - Runta ku saabsan iftiinka deegaanka iyo wax soo saarka
Runta ku saabsan iftiinka deegaanka iyo wax soo saarka
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, hal-abuurnimo muhiim ah ayaa ka dhacay berrinka quruxda cagaaran. Kaliya maahan inaan marin u helno fursado badan oo loogu talagalay daryeelka maqaarka oo nadiif ah oo aan sun ahayn, daryeelka timaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo, laakiin waxaan sidoo kale aragnaa magacyada inay diiradooda u weecinayaan sameynta alaabooyin waara oo dhab ah iyo baako, ha ahaadaan kuwa dib loo cusbooneysiin karo, dib loo buuxin karo ama dib loo isticmaali karo Biodegradable.
In kasta oo horumarkaas la gaadhay, haddana weli waxay u muuqataa inay ka mid tahay maaddooyinka ku jira maaddooyinka quruxda, in kasta oo ay tahay mid ka mid ah maaddooyinka ugu waxyeellada badan deegaanka u leh: dhalaal. Glitter waxaa badanaa loo isticmaalaa qurxinta iyo ciddiyaha. Waxay kaloo noqotay walxo caan ku ah alaabta lagu maydho, muraayadaha qorraxda iyo daryeelka jidhka, taas oo macnaheedu yahay inay aakhirka soo gali doonto marinadeena biyaha oo ay na daaweyn doonaan sida ay ugu degdegayaan qashinka. Meerahu wuxuu gaystay waxyeelo aad u daran.
Nasiib wanaagse, waxaa jira waxyaabo kale oo beddelaad ahaan deegaanka u habboon. In kasta oo laga yaabo inaannaan yeelan wax xaflado ciida ah ama xaflado muusiko mustaqbalka dhow, haddana waa wakhti ku habboon in laga beddelo qalabka birta caagga ah. Hoosta, waxaad ka heli doontaa hage mas'uul mas'uul ah (mararka qaarkoodna adag).
Illaa iyo hadda, waxaan si buuxda uga warqabnaa dhibaatada wasakheynta adduunka iyo saameynta xun ee caagagga ku leeyihiin badda. Nasiib darrose, dhaldhalaalka laga helay quruxda guud iyo waxyaabaha daryeelka shakhsi ahaaneed ayaa dambiilaha ah.
Dhaldhalaalka dhaqameed asal ahaan waa mikroplastic-ka, oo loo yaqaan waxyeelada uu u leeyahay deegaanka. Waa caag aad u yar, "aasaasaha Aether Beauty iyo madaxii hore ee Sephora waaxda cilmi baarista iyo horumarinta waarta Tiila Abbitt ayaa tiri. “Marka walxahaas wanaagsan laga helo waxyaabaha la isku qurxiyo, waxaa loogu talo galay inay hoos u daadagaan bulaacadaheena, si fudud ayay u maraan nidaam kasta oo kala sooca, ugu dambeyntiina waxay galaan marinnadayada biyaha iyo nidaamyada badda, taas oo ka sii dareysa dhibaatada sii kordheysa ee wasakheynta mikroplastics-ka. . ”
Halkaas kuma joogsato. “Waxay qaadataa kumanaan sano in la jajabiyo oo la baabi'iyo microplastics-ka. Waxay ku qaldan yihiin cunno waxaana cunay kalluun, shimbiro iyo looxaan, iyagoo baabi'inaya beerkooda, saameyn ku yeelanaya dhaqankooda, ugu dambeyntiina u horseedaya dhimasho. . ” Ayuu yiri Abitt.
Taasi waxay tiri, waxay muhiim u tahay noocyada inay ka saaraan dhaldhalaalka caag-ku-saleysan qaab-dhismeedkooda una gudbaan xulashooyin waara oo badan. Gali flash-ka la baabi'in karo.
Maaddaama baahida macaamiisha ee joogtaynta iyo bilicsanaanta ay sii kordheyso, astaamaha ayaa u weecanaya walxaha cagaaran si ay alaabtooda uga dhigaan mid soo jiidasho badan. Sida laga soo xigtay Aubri Thompson, kiimikada nadiifiyaha quruxda iyo aasaasaha Rebrand Skincare, waxaa jira laba nooc oo dhalaalaya "bey'ada-saaxiibtinimo" oo maanta la adeegsanayo: dhirta iyo macdanta ku saleysan. Waxay tiri: "Nalalka ku shaqeeya dhirta waxaa laga soo qaatay cellulose ama waxyaabo kale oo ceyriin ah oo dib loo cusbooneysiin karo, ka dibna waa la midabeyn karaa ama la dahaadhan karaa si ay u soo saaraan saameyn midab leh." Nalalka ku saleysan macdanta waxay ka yimaadaan macaadinta mica. Waxay leeyihiin It is iridescent. Kuwaas ayaa laga soo saari karaa ama lagu soo saari karaa sheybaarka. ”
Si kastaba ha noqotee, beddelaadkan dhaqameed ee soo ifbaxayaa daruuri uma fiicna meeraha, beddel kastaana wuxuu leeyahay kakanaansho u gaar ah.
Mica waa mid ka mid ah xulashooyinka macdanta ee sida weyn loo isticmaalo, warshadaha ka dambeeyaana waa mugdi. Thompson wuxuu yiri inkasta oo ay tahay, waa shey dabiici ah oo aan keenin microplasticity-ka dhulka, laakiin howlaha macdanta ee gadaashiisa ka socda waa hanaan tamar-xoog leh oo leh taariikh dheer oo anshax xumo ah, oo ay ka mid tahay shaqaaleynta caruurta. Tani waa sababta noocyada sida Aether iyo Lush ay u bilaabaan inay isticmaalaan mica synthetic ama synthetic fluorophlogopite. Qalabkan shaybaarka lagu sameeyay ayaa loo arkaa inuu amaan yahay guddiga khubarada dib u eegista walxaha isku qurxinta, waana ka nadiifsan yahay oo ka iftiin badan yahay mica-da dabiiciga ah, sidaa darteed waxay noqotay mid aad iyo aad u caansan.
Haddii calaamaddu isticmaasho mica dabiiciga ah, raadi (ama weydii!) Si loo xaqiijiyo silsiladda bixinta anshaxeed. Aether iyo Beautycounter labaduba waxay ballanqaadayaan inay soo saaraan mica mas'uul ah marka la isticmaalayo maaddooyinka dabiiciga ah, kan dambena wuxuu si firfircoon uga shaqeynayaa inuu isbeddel wanaagsan ku sameeyo warshadaha mica. Waxa kale oo jira ikhtiyaarro kale oo laga helo ilaha anshaxa, sida sodium calcium borosilicate iyo calcium aluminium borosilicate, kuwaas oo ka samaysan noocyo yar yar, oo indho-qabad leh oo borosilicate ah oo leh muraayad macdan ah oo ka samaysan Noocyo sida Rituel de Fille loo isticmaalo qurxinta.
Marka laga hadlayo dhaldhalaalka dhirta ku saleysan, dhirta waxaa badanaa loo isticmaalaa "biodegradable" ololka badan iyo walxaha jel maanta, xaaladduna waxay noqotaa mid sii murgsan. Qalabka loo yaqaan 'cellulose' waxaa badanaa laga soo qaataa geedaha adag sida eucalyptus, laakiin, sida uu sharraxay Thompson, kaliya qaar ka mid ah wax soo saarkaan ayaa dhab ahaan la noolaan karaa. Caagag badan ayaa wali ku jira qadar yar oo balaastik ah, oo badanaa lagu daro midab ahaan iyo daahan dhalaalaya, waana in lagu warshadeeyo warshadeyn si ay gebi ahaanba u baabi'iso.
Marka ay timaado dhalaalka dhalaalaya, nadiifinta cagaaran ama suuq geynta khiyaanada ayaa caan ku ah noocyada quruxda iyo soo saarayaasha si ay alaabtu ugu ekaadaan kuwo deegaanka u roon sida ay dhab ahaan yihiin. "Xaqiiqdii, tani waa dhibaato weyn oo soo food saartay warshadeenna," ayay tiri Rebecca Richards, oo ah madaxa sarkaalka isgaarsiinta ee (runti) sumadda halista ah ee BioGlitz. “Waxaan la kulanay shirkado si been abuur ah u sheeganaya in ay ka dhigayaan dhalaal dhalaalaya, laakiin dhab ahaantii waxay sameeyeen dhaldhalaalka oo ahaa warshad lagu nafaqeyn karo. Tani maahan xal maxaa yeelay waxaan ognahay in budada dhalaalaysa aysan waligeed geli doonin warshadaha Compost. ”
In kasta oo "compostable" u eg yahay doorasho wanaagsan marka hore, waxay u baahan tahay qofka xidhan inuu soo ururiyo dhammaan dhibcaha wax soo saarka ee la isticmaalay ka dibna la raro iyaga - wax taageerayaasha tooska ah ee flash aysan sameyn karin. Intaas waxaa sii dheer, sida uu Abbitt tilmaamay, howsha nafaqeynta waxay qaadan doontaa in ka badan sagaal bilood, waana wax aan macquul aheyn in la helo xarun wax karsan karta wax waqtigan.
“Waxaan sidoo kale maqalnay shirkadaha qaar oo sheeganaya inay iibinayaan waxyaabo dhalaalaya oo dhalaalaya, laakiin ku dhex daraya walxaha dhalaalaya balaastigga si loo yareeyo kharashka, iyo shirkadaha tababaraya shaqaalahooda si ay ugu sifeeyaan waxyaabaha dhalaalaya inay yihiin waxyaabo“ dumi kara ”. Si ula kac ah u jahwareeriso macaamiisha laga yaabo inaysan ka warqabin “Dhamaan caagaga waa la naci karaa, taas oo macnaheedu yahay inay u kala jajabeyso qaybo yaryar oo balaastig ah. “Richards ayaa intaas ku daray.
Ka dib markaan la xiriiray sheekooyinka noocyo badan, waxaan la yaabay markii aan ogaaday in doorashada ugu caansan ay dhab ahaantii ku jirto qaddar yar oo balaastig ah oo kaliya ay ku jirto kaalinta koowaad ee liiska "badeecadda ugu fiican ee dhalaalaysa biodegradable", laakiin caagaggaas Aad ayey u yar tahay iibintooda. Loogu ekaysiiyay sida la nooleyn karo, qaarkood xitaa waxay u egyihiin wax soo saar bilaa caag ah.
Si kastaba ha noqotee, astaanta markasta khalad ma ahan. Thompson wuxuu yiri: "Xaalado badan, tan waxaa ugu wacan xog la'aan halkii laga ahaan lahaa xaasidnimo." Calaamaduhu waxay macluumaadka u gudbiyaan macaamiishooda, laakiin noocyadu badanaa ma arki karaan asalka iyo ka shaqeynta alaabta ceeriin. Tani dhibaato ayey ku tahay dhammaan warshadaha illaa iyo inta calaamadda ah Waxaa la xallin karaa oo keliya marka alaab-qeybiyeyaasha looga baahan yahay inay bixiyaan hufnaan dhammaystiran. Macaamiil ahaan, waxa ugu wanaagsan ee aan sameyn karno waa inaan raadino shahaado iyo sumado email ah wixii macluumaad dheeri ah. ”
Hal nooc oo aad ku kalsoonaan karto biodegrade lafteeda waa BioGlitz. Iftiinkeedu wuxuu ka yimaadaa soo saaraha Bioglitter. Sida laga soo xigtay Richards, sumaddan ayaa hadda ah bilig biligleyda kaliya ee adduunka ka dhalata. The cellulose eucalyptus oo si joogto ah u go'ay ayaa lagu riixayaa filim, lagu dhajiyay rinjiyeyaal isku qurxan oo dabiici ah, ka dibna si sax ah ayaa loo gooyaa cabbirka walxaha kala duwan. Noocyada kale ee dhaldhalaalka dhirta ee caanka ku ah gebi ahaanba waa la baabi'in karaa (in kasta oo aysan caddayn in loo isticmaalo Bioglitter) waxaa ka mid ah EcoStardust iyo Sunshine & Sparkle.
Marka markay tahay dhammaan beddelaadaha tooska ah, ikhtiyaarkee ayaa ugu fiican? Richards ayaa carabka ku adkeeyay: "Marka laga fiirsanayo xalalka waara, waxa ugu muhiimsan waa in la fiiriyo geedi socodka wax soo saarka oo dhan, kaliya ma ahan natiijada ugu dambeysa." Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, fadlan noqo mid hufan oo ku saabsan dhaqankaaga oo aad awood u leedahay inaad xaqiijiso in alaabadooda la heli karo. Halkaas uga dukaamee sumadaha nooluhu karayo. Adduunyada ay fududahay in lagu dabagalo mas'uuliyadda sumadeed iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada, waa inaan ka hadalnaa welwelka iyo dalabkeena. “In kasta oo ay tahay hawl adag in la ogaado waxyaabaha run ahaantii aan waxyeello u lahayn dhulkeenna, halkii laga dacwoon lahaa oo keliya alaab aan ujeeddooyin suuqgeyn ahayn, waxaan ku boorinaynaa dhammaan macaamiisha xiisaha leh iyo kuwa daneynaya inay si qoto dheer u dersaan shirkadaha ay taageeraan, weydiiyaan su’aalo, weligoodna ha ku aaminin sheegashooyinka waara ee dusha sare. ”
Falanqaynta ugu dambeysa, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in macaamiil ahaan, aynaan mar dambe u isticmaalin alaabada biligleynaya ee biligleynaya, waana inaan sidoo kale fiiro gaar ah u yeelanaa tirada alaabada aan inta badan iibsanno. Thompson wuxuu yiri: "Waxaan u maleynayaa in sida ugu fiican ay tahay inaad isweydiiso waxyaabaha runtii ubaahan inay kujiraan dhalaalka iyo dhalaalka." “Dabcan, waxaa jira alaabooyin aan la’aantood la mid noqon laheyn! Laakiin yareynta isticmaalka waa dhinac kasta oo nolosheena ah. Horumarka ugu waara ee la gaari karo. ”
Hoosta, sheygayaga jecel ee waara ee aad aamini karto waa xulasho ka fiican oo caqli badan oo ku saabsan meeraheenna.
Haddii aad rabto inaad dib u cusbooneysiiso cilmiga deegaankaaga laakiin aad dareento go'aan la'aan, BioGlitz's Explorer Pack ayaa la kulmi kara shuruudahaaga. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay shan dhalo oo dhalaalaya caleenta eucalyptus cellulose oo midabbo iyo cabbirro kala duwan leh, taas oo ku habboon in lagu isticmaalo meel kasta oo maqaarka ah. Kaliya ku dheji astaanta 'algae-based Glitz Glu' ama aasaaska kale ee aad dooratay. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn!
Rituel de Fille, oo ah sumad nadiifin ah oo walxaha la isku qurxiyo ah, waligeed uma isticmaalin dhaldhalaalka caagga ku dhisan ee nacnacyadeeda kale ee adduunka, halkii laga dooran lahaa shimmer ku saleysan macdanta oo laga soo dhejiyay muraayadda isha-aaminka ah iyo mica synthetic. Cuncunka quruxda badan ee cirka ee cirka ayaa loo isticmaali karaa in lagu daro dhimbiillo midab leh qayb kasta oo wejiga ka mid ah (ma aha oo keliya indhaha).
Laga soo bilaabo 2017, EcoStardust oo fadhigeedu yahay Boqortooyada Ingiriiska waxay soosaaraysay iskudhaf isku dhafan oo ku saleysan cellulose oo ku saleysan dhirta, kuwaas oo laga soo dheegtay geedaha Eucalyptus ee sida joogtada ah u koray. Taxanahiisii ​​ugu dambeeyay, Pure iyo Opal, kuma jiraan 100% caag ah, waxaana lagu tijaabiyay inay yihiin kuwo gebi ahaanba ku noolaan kara biyaha macaan, taas oo ah tan ugu dhibka badan deegaanka noolaha. In kasta oo badeecadaheeda duugga ahi ka kooban yihiin oo keliya 92% caag ah, haddana weli si heer sare ah bay u noqon karaan (in kasta oo aan gebi ahaanba) lagu noolaan karin deegaanka dabiiciga ah.
Kuwa doonaya inay noqdaan wax yar oo dhalaalaya oo aan si xad dhaaf ah loo isticmaalin, fadlan tixgeli dhalaalayadan dhalaalaya iyo guud ahaan qurxinta bushimaha ee Beautycounter. Astaantu ma aha oo kaliya inay ka hesho masaafo mas'uul ah waxyaabaha dhalaalaya ee caag ku saleysan ee alaabteeda oo dhan, laakiin sidoo kale waxay si firfircoon ugu dadaalaysaa inay ka dhigto warshadaha mica meel bannaan oo hufan oo anshax leh.
Xitaa haddii aadan jeclayn dhalaalaya, waad ku nasan kartaa musqusha dhalaalka. Dabcan, sida saxankayaga oo kale, barkadda qubeyska ayaa asal ahaan si toos ah ugu soo noqota marin biyoodka, markaa waa muhiim in maskaxda lagu hayo nooca sheyga aan u isticmaalno inaan ku qoyno maalin. Lushku wuxuu siinayaa sheyga dhalaalka mica synthetic iyo borosilicate halkii dhalaalka ee mica dabiiciga ah iyo dhalaalka balaastigga, sidaa darteed si fudud ayaad u neefsan kartaa maxaa yeelay waxaad ogtahay in waqtiga qubeyska uusan aheyn oo kaliya jawiga deegaanka, laakiin sidoo kale anshax.
Raadinta dhalaalka dhalaalaya, ee ma ahan dhalaalka dhalaalaya? Aether Beauty's Supernova soo iftiimaya waa mid aan fiicnayn. Qalinku wuxuu adeegsadaa mica anshax iyo dheeman jaalle ah oo jajaban si uu u soo saaro iftiin dahabi ah oo adduunyo.
Ugu dambeyntii, wax ka dhigaya arjiga qorraxda madadaalo! SPF 30 + cadceedda aan biyuhu ka madhnayn ayaa lagu shubay maadooyin nafaqo leh, antioxidants iyo qadar caafimaad leh oo dhalaalaya halkii caag ah. Astaantu waxay xaqiijisay in dhaldhalaalka uu yahay 100% la nooleyn karo, oo laga soosaaray lignocellulose, waxaana si madaxbanaan loo baaray xaalufinta biyaha macaan, biyaha cusbada, iyo ciidda, sidaa darteed waxay dareemeysaa fiicnaan markii la dhigo bac xeebeedka.
Haddii aad rabto inaad cidiyahaaga u diyaargarowdo fasax, tixgeli inaad adeegsato xirmo cusub oo fasax ah oo ka socda astaanta daryeelka ciddiyaha nadiifka ah Nailtopia. Sida sumaddu xaqiijisay, dhaldhalaalka dhammaan loo isticmaalay midabadan daabacan ee xaddidan waa 100% baaba'a oo kuma jiraan wax caag ah. Waxaan rajeyneynaa in hooska dhalaalaya ay noqdaan muuqaal joogto ah oo ku saabsan safka sumadda.
Waqtiga boostada: Jan-15-2021